Elizabeth Arden- Ganacsi aanay Aqoon u Lahayn bay Bilawday…. | Maankaab.com
Elizabeth Arden- Ganacsi aanay Aqoon u Lahayn bay Bilawday….
Haweenay la odhan jiray Elizabeth Arden oo u dhalatay degaanka Florence Nightingale Graham ee dalka Kanada (Canada) markay taariikhdu ahayd 1878kii, ayaa noqotay mid ka mid ah haweenkii soo maray dunida ee mucjisadaha ku ahaa arrimaha ganacsiga.
Nolosheedu ma ay ahayd mid guul kaliya iyo caqabad la’aan la kulantay, balse waxa ay ka gudubtay guul darooyin badan si ay u gaadho guusheeda. Waxa ay samaysatay 1929kii ganacsi la odhan jiray ‘Boqortooyadii Quruxda’ (Beauty Empire). Waxa ka mid ah ganacsiga ay dhidibada kaligeed u taagtay 150 koofeerada la isku qurxiyo ah (Salons) oo ku kala yaala Maraykanka iyo Qaarada Yurub. Sidoo kale, waxa ay samaysay 1000 nooc oo alaabta la isku qurxiyo ah oo 22 dal ay u iibgeyso. Waqtigeedii waxa loo yaqaanay in ay ka mid ahayd haweenka ugu lacagta badan adduunka.
Guulahaas ay gaadhay may ahayd kuwo ay nasiib ku heshay, balse ay ka horeeyeen guul-darrooyin ay ka gudubtay. Sannadkii 1909 oo ay ahayd 31 jir ah, waxa ay ku guul darraysatay ganacsi ay bilawday, gaar ahaan ganacsi wadaag ah oo 6 bilood uun u socday oo ay ku hirgelisay magaca Elizabeth Hubbard.
Waqtigaas sannad kadib oo ku beegnayd 1910kii oo ay 32 jirsatay, waxa ay beddeshay hannaankii ganacsigeedu u shaqaynaayey iyo magaciiba waxaanay ku bilawday ganacsi cusub magaca Elizabeth Arden. Waxa ay urursatay oo ay kaydin jirtay lacagta ka soo baxda koofeer ay samaysay. Isla sannadkaas waxa ay koofeer cusub ka furtay magaalada New York, kaaso u bixisay Red Door Salon.
Wax aqoon ah uma ay lahayn qurxinta iyo hannaanada koofeeradu u shaqeeyaan, waana sababta ganacsiyadeeda bilawga ay ugu guulayan wayday oo mar walba ay uga kacayeen. Sidaa darteed waxa ay sannadkii 1912 u safartay dalka Faransiiska si ay ugu soo barato farsamada koofeerada iyo xisaabta. Markii ay soo noqotay waxa ay si toos ah ugu biirtay ciidammada oo ay u samayn jirtay qalab la isku dardaro oo ay hubka ka sameeyaan.
Aakhirkii waxa ay ku guulaysatay in ay samaysato shirkad aad looga soo dhaweeyey dunida reer galbeedka oo qalabka la isku qurxiya farsamaysa. Si dhakhso ah waxa ay kaga mid noqotay dabaqada sare, shirkadeedii Elizabeth Arden, Inc. waxa ay ku guulaysatay in sannadkii ay iibiso alaab $1 bilyan oo doollar ah. Waxa caqabado badan oo ay ka soo gudibtay aawadeed ka mid noqotay ganacsatada guulaystay ee iibgaysa alaabaha la isku qurxiyo oo ilaa hadda dunida kaalmaha u horreeya kaga jira.
W/D: Ibrahim Khadar